Ma lagu talinayaa in carruurtu caga-la’aan ku baxdo? | Bezzia
Maria Jose Roldan | 30/04/2021 22:00 | Talada hooyooyinka
Marwalba waxaa jiray mowqifyo is khilaafsan oo ku saabsan haddii ay ufiican tahay carruurtu inay cago la’aan ku socdaan ama ay kaga fiicnaadaan kabo. Waalidiin badan ayaa ka hor istaaga caruurtooda inay cagahooda ku maraan guriga iyagoo ka baqaya inay hargab ku dhacaan.
Kani waa quraafaad run ah tan iyo markii fayrasyadu jidhka ka galaan marinnada neefsashada. Taas bedelkeeda, khubarada mowduucani waxay ku talinayaan in ilmuhu lugo ku ahaado guriga tan iyo markii sidan cagaha ay u horumariyaan si ka wanaagsan sidii hore.
1 Carruurtu ma inay xirtaan kabo?
2 Waa maxay faa'iidooyinka ay carruurtu u leeyihiin inay caga-la’aan ku baxaan?
3 Ka taxaddar haddii ilmuhu cagaha ku maro
Carruurtu ma inay xirtaan kabo?
Khubaradu waxay ka talo bixinayaan in dhallaanka la saaro kabaha inta lagu jiro bilaha ugu horreeya da'da. Marka ay timaado inaad ka ilaaliso cagahaaga yar heerkulka hoose ama naxdinta, iska geli sharaabaadyo. Xusuusnow in gurguurtu ay fure u tahay horumarka wanaagsan ee nidaamka cilmi nafsiga ilmaha, markaa waa inaysan kabo ku wadan cagaha.
Marka ilmuhu bilaabo inuu socdo, waalidku waa inay doortaan inay xidhaan nooc kabo ah oo jilicsan oo neefsan kara. Laga bilaabo 4 ama 5 sano jir, kabaha la isticmaalay waa inay ahaadaan kuwo adag oo xoog badan si loo ilaaliyo cagaha ilmaha.
Waa maxay faa'iidooyinka ay carruurtu u leeyihiin inay caga-la’aan ku baxaan?
Inaad lug la'aan ku baxdo kabo la'aan waxay oggolaan doontaa sameynta fiiqan ee cagta, iyaga oo ka hortagaya inay ku silcaan waxa loo yaqaan cagaha fidsan.
Inta lagu jiro nolosha ugu horreysa, eilmuhu wuxuu yeelan doonaa xasaasiyad ka weyn cagaha marka loo eego gacmahas. Adoo lugo lugeynaya, cagahaagu waxay kaa caawinayaan inaad sahamiso adduunka kugu xeeran. Intaas waxaa sii dheer, in kabo la’aan lagu socdo waxay u oggolaaneysaa ama gacan ka geysaneysaa horumar ka wanaagsan dhammaan dareenka kan yar.
Markaad lugaynayso kabo, kan yar wuxuu dareemi doonaa noocyo kala duwan oo cadka ah oo dhex maraya cagahooda. Tani waxay ilmaha u oggolaaneysaa inuu yeesho dareemo kala duwan oo loo yaqaan kinesthetic, kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta booska muruqyada kala duwan iyo in la xoojiyo kala-goysyada jidhka.
Ka taxaddar haddii ilmuhu cagaha ku maro
In lagugula tallan karo inaad cago cag tagto, Micnaheedu maaha in ilmuhu waa inuu marwalba helaa nooc kabo ah. Xaga tagista barkadda, waxaa muhiim ah in kan yari xirto dacas, maadaama ay tahay meel infekshannada kala duwan badanaa laga qaado.
Haddii ay dhacdo in nooc ka mid ah dhaawaca la samayn karo iyadoo la lugeynayo kabo la'aan, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa dhaawaca uu sababay. Xaalado badan ayaa lagama maarmaan ah in la qaato tallaalka teetanada si looga hortago infekshanku ka sii daro oo uu u keeno dhibaatooyin culus oo halis ah.
Waalidiintu waa inay ogaadaan wakhti kasta xaaladaha uu kan yari gabi ahaanba caga-cageyn karo iyo markay u baahan yihiin inay kabo xidhaan. Uma oggolaan kartid in ilmuhu had iyo jeer kabo la’aan tago oo uu u barto inuu maro cago-cag ah.
Gaaban, Dhakhaatiirta iyo xirfadlayaashu waxay kugula taliyaan in kuwa yaryar ay gabi ahaanba cagahooda ku socdaan wakhti maalintii. Xaqiiqda ah in dhulka la dareemo oo lagu dul socdo iyada oo aan la helin nooc kabo ah, ayaa ka caawinaysa iyaga in ay yeeshaan horumar ballaadhan oo xagga nidaamka cilmu-nafsiga ee ay ku jiraan faa'iidooyinka kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Talada hooyooyinka » Ma lagu talinayaa in carruurtu caga-la’aan ku baxdo?